Fifidianana Karana Indiana 09 : Niray safidy hanamafy ny fahamarinan-toerana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Mey 2009 21:47 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Swahili, Español, বাংলা, English
Tonga avokoa ny valim-pifidianana avy any amin'ny vazantany efatra any India ary dia mazava fa nisafidy mazava ny governemantan'ny hery afovoany marintoerana, eo ambany fitarihan'ny UPA ao amin'ny Kongresy ity firenena ity. Ho fanindroany ny Dr. Manmohan Singh no ho Praiminisitra. Na dia mbola tsy tonga avokoa aza ny voka-pifidianana dia efa nanambara ny fahareseny sahady ny firaisankinan'ny vondrona NDA alliance notarihan'ny BJP nahita ny fironan-tsafidy.
Niarahaba ny amin'ny fametraham-pitokisana nataon'ny mpifidy mandritra ity fe-potoana fiasana vaovao ity ny mpitarika ny UPA Rtoa Sonia Gandhi. Nandritra ny valan-dresaka nataony tamin'ny mpanao gazety tamin'ny 4 ora folakandro tany an-toerana no nilazany hoe, “Fantatry ny vahoaka Karana izay heveriny ho mahasoa azy ary mety ny safidy nataony.”
Ny Fifidianana Karana (#indiavotes09) no nitarika tao amin'ny fironana be mpanaraka indrindra tao amin'ny twitter androany. Indreto misy hevitra avy amin'ny tweeters vitsivitsy:
Raha maro ny faritra nisiana horakora-pifaliana dia nanjonitra kosa ny mpanohana ny BJP. Toy izao ny nosoratan'ny mpamaham-Bolongana Chakresh Mishra tao amin'ny bolongany:
05 Marsa 2021Azia Atsimo